April 2012 | သန်လျင်သား
ဘ၀ဟာ ဖတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဆို မာတိကာမှာ ငါ့နာမည် ရှိချင်တယ်
ဘလောဂ့်မရေးဖြစ်တာအတော်ကြာပါပြီ။ ဘလောဂ့်ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်မကျေပွန်တဲ့အတွက် ဘလောဂ့်ဂါအကိုအမတွေ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ သင်္ကြန်နီးကတည်းက ဘလောဂ့်ပေါ်မရောက်တော့ပါဘူး။ ဒီနေ့တော့ ဘလောဂ့်ပြန်စရေးရင်း ဟာသလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးရယ်မောပျော်ရွှင် ခံစားနိုင်ကြပါစေ။
လူတစ်ယောက်သည် စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှ ယပ်တောင် တစ်ချောင်း ၀ယ်ယူသွားသည်။
ခဏအကြာ ဒေါသတကြီးဖြင့် ဆိုင်သို့ပြန်ရောက်လာသည်။
၀ယ်သူ- ဒီမှာ ခင်ဗျာတို့ ယပ်တောင်က ၀ယ်သွားတာမကြာသေးဘူး။ အခုကျိုးသွားပြီ။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ
အရောင်းစာရေး- တဆိတ်ခင်ဗျ။ လူကြီးမင်းက ယပ်တောင်ကို ဘယ်လိုခပ်ပါသလဲ။
၀ယ်သူ- ဘာ..ဘယ်လိုခပ်လဲဟုတ်လား။ မျက်နှာရှေ့မှာ ယပ်တောင်ကို ဟိုဘက်ဒီဘက်ခပ်တာပေါ့ ဗျ။
အရောင်းစာရေး- အဲ့ဒါဆို လူကြီးမင်း မှားနေပြီခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ တစ်ဒေါ်လာတန် ယပ်တောင်က ယပ်တောင်ရှေ့မှာ မျက်နှာကို ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပေးရတာခင်ဗျ။
တစ်ခါက ကြက်နှစ်ကောင် လမ်းမှာတွေ့ကြသည်။ တစ်ကောင်က စတင်နူတ်ဆက်လိုက်သည်။
''ဟေ့ကောင် ဘယ်က ပြန်လာတာလဲ''
'' ၀ုတ်ဝုတ် ''
'' ငါနိုင်ငံခြား ဘာသာစကား သင်ထားတာလေ ''
တစ်ခါက လူသုံးယောက်မျက်စိလည် လမ်းမှားပြီး တောအုပ်တစ်ခုထဲသို့ ရောက်သွားကြသည်။ ထိုတောအုပ်တွင် ကြီးစိုးနေသော ဘီလူးတစ်ကောင်က သူတို့သုံးယောက်အား ဖမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ သူတို့သုံးယောက်အား မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော အသီးတစ်လုံးစီအား ခူးယူခိုင်းလေသည်။ ပြီး ထိုအသီးများကို အသံမမြည်အောင် မျိုချခိုင်းလေသည်။ ပထမလူက ပန်းသီး မျိုရလေသည်။ အသံမြည်သွား၏။ ထိုလူအား ဘီလူးက သတ်လိုက် သည်။ ထိုလူသေပြီး တမလွန်သို့ ရောက်သွားသည်။ သိပ်မကြာခင် တတိယလူရောက်လာသည်။
ပထမလူ- ဟေ့လူ ခင်ဗျားက ဘာအသီးမျိုလိုက်လို့ ဒီကိုရောက်လာတာလဲ
ပထမလူ- ဟာဗျာ... စပျစ်သီးမျိုတာတောင် အသံမြည်ရတယ်လို့
တတိယလူ- မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ဒုတိယလူ မျိုတာကိုကြည့်ပြီး ရယ်လိုက်လို့ပါ
ပထမလူ- နေပါဦးဗျ... ဒုတိယလူက ဘာအသီးမျိုလိုက်လို့လဲ..
တစ်ခါက လူတစ်ယောက်သည် ညအမှောင်ကြီးထဲတွင် လမ်းလျှောက်လာသည်။ တစ်နေရာအရောက် သူရှေ့တည့်တည့်မှာ အပုံတစ်ပုံခံနေလေသည်။ ထိုအပုံမှာ အနံ့တစ်ခုရလေသည်။ ထိုလူက ကျော်မသွားဘဲ ထိုအပုံအား လက်ညိုးဖြင့် ကလော်ကာ လျှာပေါ်သို့ တို့ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးမှ ၀မ်းသာအားရဖြင့်
'' ဟာ ချီးပုံဟ တော်သေးတယ် မတက်နင်းမိလို့ ''
တစ်ခါက စိတ်ရောဂါသည် တစ်ယောက်သည် ဆေးရုံအုပ်ကြီးဆီသို့ လာရောက်တိုင်ကြားလေသည်။
စိတ်ရောဂါသည်- ဆရာကြီး ကျွန်တော်ဘေးခုတင်က ကောင်ကို တခြားအခန်းကို ပြောင်းပေးပါ။
ဆေးရုံအုပ်ကြီး- သူက မောင့်ရင်ကို ဘာတွေနှောက်ယှက်လို့လဲ
စိတ်ရောဂါသည်- အဲ့ကောင်က ညညကျရင် သူခေါင်းက မီးတွေလင်းနေပြီလို့ ထထအော်တယ်
ဆေးရုံအုပ်ကြီး- အဲ့ဒါ မောင့်ရင်အတွက် ဘာအနှောက်ယှက်ဖြစ်လို့လဲ
စိတ်ရောဂါသည်- ကျွန်တော်က မီးလင်းရင် မအိပ်တတ်လို့ပါ။
Posted by မိုးနင်း at 9:20 PM 1 comments
Myanmar Ebooks Free Download
ရေးသားသူ-မိုးနင်း. Powered by Blogger.
Copyright © သန်လျင်သား. Designed for memory cards - Real Estate Costa Rica , Search Engine Optimisation Melbourne, Fragrances and Perfumes